‘लभ’ परेको श्रीमान् श्रीमतीलाई अदालतले डिभोर्स गरिदिन पाउँछ? : प्रचण्ड – Sodhpatra
प्रकाशित : २८ चैत्र २०७७, शनिबार १६:३९ April 10, 2021
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतले अदालतले लभ परेको श्रीमान् श्रीमतीको अदालतले डिभोर्स गरिएको बताएका छन्।
पेरिसडाँडामा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समितिको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो बडो लभ परिरहेको थियौँ। तपाईंहरूले देख्नुभयो नी। २८ गतेको आमसभामा म कसरी बोले, माधवजी कसरी बोल्नुभयो। झलनाथ जी कसरी बोल्नुभयो। लभ नपरेको भए त्यसरी बोलिने थिएन नी त। बडो लभ परेको श्रीमान् श्रीमतीलाई अदालतले डिभोर्स गरिदिन पाउँछ?’
अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने गरेको फैसला अस्वभाविक भएको टिप्पणी गरे। नेकपाको एकता भंग हुनुअघि माधव नेपाल समूहसँग आफ्नो लभ पर्दा पर्दै छुटाइदिएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘लभ परि रहेकोलाई डिभोर्स गरेको यो त प्राकृतिक रुपमा पनि अन्याय भयो। कतैबाट पनि मिल्ने कुरा हो त? अहिले दुलहा दुलही रुँदै रुँदै आआफ्नो घरमा। अदालतको निर्णय अप्राकृतिक, अस्वभाविक, अनैतिक भयो नी त। सेटिङमा भयो हामीले लभ गर्नु हाम्रो के दोष भयो। मिलाएरै लगेका थियौँ। फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन आवश्यक छ।’
प्रचण्डले केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गरेका छन्। ‘नेकपाको कमाण्ड गरेर आफूले केपी ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गरेको बताए। केपी प्रवृत्तिविरुद्ध एमाले नेताहरूले समेत संघर्ष गरेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘नेकपामा केपीलाई कारवाही मैले मात्रै गर्‍या हो त? नेकपा एमालेको नेताहरुले पनि उनको विरुद्ध संघर्ष गरेका हुन्। र, ओलीमाथिको कारवाही वैधानिक, संविधानत र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार नै हो।’
पार्टी एकताको कमाण्ड लिएर केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न सफल भएको प्रचण्डको दाबी गरे। त्यसअघि नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै केपी ओली संविधान र ऐन कानूनलाई मिच्दै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा रहेको आरोप लगाए।
शुक्रबार बसेको तीन दलको बैठकले सरकारले राज्यका सबै अङ्गहरूलाई सन्त्रासमा राख्ने र कब्जा गर्ने कोसिस गरेको निष्कर्ष निकालेको बताए। -थाहाखबरबाट